Maitiro ekusarudza maemail account aunoda kuwona pane yako Apple Watch | Ndinobva mac
Maitiro ekusarudza maemail account aunoda kuwona pane yako Apple Watch
Pane sarudzo inowanikwa paApple Watch iyo inotitendera kuti tigadzirise maakaundi emaimeri atinoda kuona uye kubva kwatinoda kugamuchira zviziviso paApple Watch. Iyi sarudzo inonakidza kubvisa kana kudaro, mira kugamuchira maemail kubva kuaccount. Iyi sarudzo iri nyore kwazvo kugadzirisa uye zvinogona kuitwa zvakananga kubva pawachi pachayo, Izvo hazvidi kuti uve ne iPhone muruoko rweizvi, ehe, zvakafanira kuti isu takagadzirisa email maakaundi neApple Watch kuti tikwanise kuita chiito ichi.
Matanho acho ari nyore uye zvese zvatinofanirwa kuita kuwana maakaunzi emaimeri nekupinda Chinyorwa cheMail kubva kuApple Watch pachayo. pfugama kusvika pasi nekudzvanya nekorona yedigital uye tinya pa «Gadzirisa». Izvo zvinongova kudzvanya apo patinoona kuti maakaundi ese atakawiriranisa anochengeta "cheki" padivi uye muchikamu icho tinogona kumisikidza kana kudzima kwatinoda.
Iye zvino zvese zvatinofanirwa kuita kubvisa maakaundi atisingade kugamuchira maemail uye ndizvozvo. Mukati meiyo gadziriso pachayo tinokwanisa zvakare kusarudza maakaundi atakafanotangisa pane iyo iPhone, kumisikidza iyo Yekutsikisa machenjedzo, kuratidza kana kwete iyo isina Kuverengwa, Akanyorwa maemail, nezvimwe. Marongero emaMail kubva kuApple Watch akapusa uye anotibvumira gadzirisa maemail uye notices dzinosvika kwatiri zvishoma kushandisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Maitiro ekusarudza maemail account aunoda kuwona pane yako Apple Watch
Iyi ndiyo mhedzisiro yemari yeApple yekota yechitatu 2020